Dhaabbanni Faransaay Maltereyees Sofeleet Ityoophiyaatti warshaa biqilaa ijaarsisuuf dhakaa bu’uuraa kaa’e – Fana Broadcasting Corporate
Dhaabbanni Faransaay Maltereyees Sofeleet Ityoophiyaatti warshaa biqilaa ijaarsisuuf dhakaa bu’uuraa kaa’e
Finfinnee, Bitooteessa 5, 2011 (FBC)- Sadarkaa idil addunyaatti biqila oomishuun kan beekamu Dhaabbanni Faransaay Maltereyees Sofeleet Ityoophiyaatti warshaa biqilaa Yuuroo miliyoona 70n ijaarsisuuf dhakaa bu’uuraa kaa’e.
Dhaabbatichi Ityoophiyaatti fedhiin biiraa dabalaa dhufuun walqabatee, dhaabbileen idil addunyaa kanneen akka Henkeenii fi BJI biiraarratti hojjachuun isaanii warshiicha banuuf sababa akka ta’eef beeksiseera.
Dhaabbatichi oomishaalee dheedhii qonnaa fi garbuu kallattiin qonnaan bulaa irraa walitti qabee gabaaf akka dhiyyeessus beeksiseera.
Dhaabbattichi warshaa biqilaa Ityoophiyaatti ijaarsisuuf garbuu walitti qabuuf qonnaan bulaa kuma 40 waliin walitti hidhatiinsa uumuun fayyadamaa akka isaan taasisu beeksiseera.
Waarshichis kan ijaaramuuf karoorfame lafa heektaara 10 irratti yoo ta’u, yemmuu ijaarsi isaa xumurame immoo carraa hojii dhaabbii namoota 300 oliif ni uuma jedhameet eegama.
Warshaan kunis akka lakkoofsa Faranjootaa bara 2020tti hojiitti ni seena jedhameet eegama.
Dhaabbanni Maltereyees Sofeleet warshaa biqilaa 27 biyyoota akka Aworooppaa, Eeshiyaa, Afrikaa Kibbaa fi Ameerikaa keessaa akka qabu ni dubbatama.